Tag: Galmudug | Sagal Radio Services
Galmudug iyo Ahlsuna oo lagu wadal hadalsiinayo magaalada Nairobi
Sagal Radio Services • News Report • November 18, 2017
Maamulka Galmudug iyo Ahlusuna ayaa wada hadal uga furmaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyadoo wada hadalkan ay garwadeen ka tahay urur goboleedka IGAD.
Madaxweyne kuxigeenka Galmudug oo ka hor-yimid taageeradii Xaaf u muujiyay Sacuudiga iyo Imaaraadka
Kusimaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey, Guddoomiyaha Baarlamaanka, iyo Guddoomiye kuxigeenka ayaa war wadajir ah oo ay goor dhow ka soo saareen Cadaado waxay kaga soo horjeesteen go’aankii xalay ka soo baxay Madaxweyne Xaaf, kaasoo lagu taageerayay Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ee xiriirka u jaray dowladda Qatar.
Galmudug oo beenisay in musuq maasuq baahsan lagu hayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee Cadaado
Dowladda gobolleedka Galmudug ayaa ku gacan-seyray eedeymo la xiriira doorashada xubnaha aqalka hoose ee ka socta Cadaado oo lagu tilmaamay mid musuq-maasuq baahsan uu ka jiro.
Galmudug oo ku eedeysay Puntland in dagaalka Gaalkacyo gaarsiisay meel aan jirin
Maamulka Galmudug ayaa ku eedeeyay Puntland inay indhaha ka qarsatay dadaalada nabadeed ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka iyo xiisada ka taagan magaalada Gaalkacyo.
Galmudug oo sheegtay in dagaalo abaabulan oo saddex geesood lagu soo qaaday
Sagal Radio Services • News Report • October 13, 2016
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegtay in dagaalo abaabulan oo saddex geesood ah lagu soo qaaday deegaanada ay maamusho ee Mudug iyo Galgaduud.
Galmudug oo beenisay eedeyntii Puntland u jeedisay dowladda Soomaaliya
Maamulka Galmudug ayaa beeniyay eedeyn shalay kasoo yeertay maamulka Puntland oo aheyd in dowlada Soomaaliya ay door ku laheyd dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Maamulka Galmudug oo soo dhoweeyay dhaarinta xildhibaanada Hirshabeele
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Madaxtooyada Maamulka Galmudug ayaa lagu soo dhoweeyay dhaarinta xildhibaanada maamulka cusub ee Hirshabeele.
Maamulka Galmudug oo beeniyay in ay ciidamada Galmudug iyo Alshabaab uu iskaashi ka dhaxeeyo
Maamulka Galmudug ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ugaga hadlayo dagaal shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxana uu ku beeniyay in iskaashi u dhexeeyo ciidamada Galmudug iyo kuwa Alshabaab.
Madaxweynaha Galmudug Guuleed oo ka hadlay weerarkii xalay ka dhacay duleedka Gaalkacyo
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay weerar ay ciidamo hubeysan iyo duqeynba ku qaadeen saldhig ay ciidamada Galmudug ku lahaayeen duleedka magaalada Gaalkacyo.
Ciidamada Nabadsugida Galmudug oo soo furtay muwaadin Kenyan afduub loo heystay
Ciidamada Nabadsugida Maamulka Galmudug ayaa maanta xoog ku soo furtay muwaadin Kenyan lagu magacaabayay James Gajumbo, kaasoo muddo 15 bilood afduub loo heystay.
Madaxweynaha Galmudug oo furay Garoonka Diyaaradaha USHAKA ee Koofurta Gaalkacyo
Madaxweynaha Galmudug ee Soomaaliya Cabdikarim Xuseen Guuleed ayaa shalay si rasmi ah u furay Garoonka diyaaradaha Ushaka ee degmeda Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, kaasoo noqon doonaa garoon diyaaradeed u gaar ah maamulkiisa.
Madaxweynaha Galmudug oo magacaabay Golihiisa Wasiirada (Akhriso Magacyada)
Sagal Radio Services • News Report • August 29, 2015
Madaxweynaha Galmudug oo lagu wado in saacadaha soo socda uu magacaabo Golaha Wasiirada
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu magacaabo Golaha Wasiirada maamulkiisa, kadib wada tashiyo uu muddooyinkii u dambeeyay ka waday magaalada Cadaado.
Madaxweynaha: ‘’Maamulka cusub ee Galmudug waxaan uga fadhinaa inuu ka shaqeeyo nabadda iyo horumarka shacabka
Sagal Radio Services • News Report • July 24, 2015
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Cadaado kaga qeybgaley munaasabadda caleema saarka Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku Xigeenka maamulka ku meel gaarka ah ee Galmudug.
Cabdi Qaybdiid oo shaaciyay inay Xayiraaddii ka qaadeen Garoonka Gaalkacyo
Madaxweynaha Galmudug, Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) oo maanta shir jiraa’id ku qabtay Gaalkacyo ayaa sheegay inay xayiraaddii ka qaadeen garoonka diyaaradaha Magaalada Gaalkacyo ee ay maamusho Puntland.
Wasiirkii Cadaaladda Galmudug oo shalay magaalada Hargeysa ku geeriyoodey Maantana lagu aasayo Gaalkacyo
Wasiirkii cadaaladda maamulka Galmudug, Sheekh Xijaas Macallin Maxamed ayaa shalay xanuun awgiis ugu feeriyooday magaalada Hargeysa, iyadoo lagu wado in maanta lagu aaso magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.